Samsung Galaxy Note9နှင့် iPhone X vs Huawei P20 Pro | Gadget သတင်း
Samsung Galaxy Note9နှင့် iPhone X vs Huawei P20 Pro
Ignatius ခန်းမ | | မိုဘိုင်း, တယ်လီဖုန်း
နာရီအနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင်အောင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ၏အထင်ကရတရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ Galaxy Note9ကိုစျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးစမတ်ဖုန်းကိုဈေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်စမတ်ဖုန်းကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည့်ထုတ်လုပ်သူအားလုံး၏နောက်တွင်လိုက်ရန်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း Samsung မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှအောင်မြင်ခြင်းမရခဲ့ပါ။
Galaxy Note9၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ Samsung နှင့်အတူ Samsung နှင့် Huawei တို့တွင်အဓိကပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စမတ်ဖုန်းအများဆုံးရောင်းချသောထုတ်လုပ်သူသုံး ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် Samsung Galaxy Note 9, iPhone X နှင့် Huawei P20 Pro တို့၏နှိုင်းယှဉ်ချက်.
Galaxy Note ကို 9
Huawei က P20 Pro ကို
အတိုင်းအတာ 161.9 76.4 8.8 မီလီမီတာ 144 71 7.7 မီလီမီတာ 155 78 8.2 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 201 ဂရမ် 174 ဂရမ် 190 ဂရမ်
ဖန်သားပြင် ၆.၄ လက်မ QuadHD + Super Amoled 6.4 x 2960 Pixels (1440 dpi) ၅.၈ လက်မ OLED 5.8 x 2.436 (1.125 dpi) ၆.၁ လက်မအရွယ် Amoled ၂,၂၄၀ x ၁၀၀ (၄၀၈ dpi)
ရေ / ဖုန်ခုခံနိုင်မှု IP68 IP67 IP67
Processor ကို Exynos9စီးရီး 9810: 10 nm ။ 64 bit A11 Bionic + M11 ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ coprocessor ။ 64 bit HiSilicon Kirin 970 + 64-bit NPU
သိုလှောင်မှု 128 GB ကို / GB ကို 512 64 GB ကို / GB ကို 256 128 GB ကို
RAM ကို6GB ကို / GB ကို 83GB ကို6GB ကို
MicroSD ဟုတ်ကဲ့ 512 GB အထိပါ NO Si
နောက်ကင်မရာ 12 အမတ်။ Dual Pixel AF - OIS - အကျယ်ထောင့် + ၁၂ MP တယ်လီဖုန်း -f/ ၂.၄ ။ 12 MP ကျယ်ပြန့်သောထောင့်f/ 1.8 + 12 MP telephotof/ 2.4 - Double OIS - optical zoom 40 MP (RGB)f/ 1.8 + 20 MP (B / W)f/ 1.6 + 8 MP telef/ 2.4 - 5x hybrid zoom
ရှေ့ကင်မရာ ၈ လွှတ်တော်အမတ် AF ။ က F / 8 ကို aperture 8 အမတ်,f/ 2.4 ကို aperture ၂၄ ဦး ပါ ၀ င်သည်။ က F / 24 ကို aperture
ဘက်ထရီ 4.000 mAh ။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း 2.716 mAh ။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း 4.000 mAh မြန်ပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း
extras လက်ဗွေ sensor - နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ - မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း - Iris အသိအမှတ်ပြုခြင်း။ နယူး S Pen (ဘလူးတုသ်) ။ Knox လုံခြုံရေးစနစ် Face ID - 3D ထိပုတ်ပါ လက်ဗွေ sensor - Doly Atmos စပီကာများ - မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း
စျေးနှုန်းများ 1.008 ယူရို 128 GB ဗားရှင်း / 1.259 ယူရို 512 GB ဗားရှင်း 1.159 ယူရို 64 GB ဗားရှင်း / 1.329 ယူရို 256 GB ဗားရှင်း 779 ယူရို
5 ဟုတ်တယ် Stylus မဟုတ်ဘူး
6.1 Samsung Galaxy Note9၏အရောင်များ
6.2 iPhone X အရောင်များ
6.3 Huawei P20 Pro အရောင်များ
Samsung Galaxy Note9သည်အလွန်ကြီးမားသော ၆.၄ လက်မဖန်သားပြင်တွင်ထင်ရှားသည်။ (၎င်းသည် Note 6,4 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၀.၁ လက်မသာတိုးလာသည်) ထို့အပြင် notch ဟုလည်းခေါ်သည့်မည်သည့် notch ကိုမဆိုရှာမတွေ့ပါ။ iPhone X က ၅.၈ လက်မအသေးဆုံးမျက်နှာပြင်ကိုပေးနေချိန်မှာ Huawei P0,1 Pro က ၆.၁ လက်မရှိပေမယ့် Apple မော်ဒယ်လိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာသေးငယ်တဲ့ notch ကိုပြသထားတယ်။ iPhone X ထက်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိတယ်။
resolution အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Galaxy Note9ကဒီစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရလိုက်တယ် Super Amoled မျက်နှာပြင်သည် 18.5:9aspect ratio သည်သိပ်သည်းဆ 2.960 နှင့်အတူ 1.440 x 516 သို့ရောက်ရှိသည်။ ၁၉.၅: ၉ OLED မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားရှိသော iPhone X သည် ၂,၄၃၆ x ၁,၁၂၅ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Huawei ၏အထင်ကရ terminal၊ P19,5 Pro သည် ၆.၁ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ၁၈.၇: ၉ format နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် resolution9x 2.436 ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသုံး ဦး သည်မိမိတို့နှိုင်းယှဉ်ထားသောဆိပ်ကမ်းများ၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရွေးချယ်ထားသောကြောင့်ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်သည်အထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ Samsung က Exynos 9810၊ Apple A11 Bionic နှင့် Huawei တို့ကို Kirin 970 အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါတို့အချင်းချင်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်၊ သူတို့က Note9နဲ့ P20 Pro တို့ပါနှစ်ခုလုံးကို Android ကစီမံထားတယ်။
Samsung model ကကျွန်တော်တို့ကိုအာရှကုမ္ပဏီထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ မှန်ကန်သောအချက်များအရ iPhone A11 ပရိုဆက်ဆာသည် Samsung နှင့် Huawei မော်ဒယ်များထက်များပြားသောနံပါတ်များကိုပေးထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်မတူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုစီမံသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ သူတို့ကအကောင့်သို့ယူရန်တစ် ဦး ကိုကိုးကားဖြစ်လာဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။
El Galaxy Note9ကို6နှင့် 8 GB RAM အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြင့်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့သည်။ 128GB ပမာဏမော်ဒယ်ကို 6GB RAM ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး 512GB သိုလှောင်မှုပုံစံသည်စျေးကွက်သို့ 8GB မှတ်ဉာဏ်ဖြင့်ရောင်းချမည်။
iPhone X ကို 64 နှင့် 256 GB ဗားရှင်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ 3GB RAM သာတပ်ဆင်ထားပါတယ်Huawei P20 Pro ကဲ့သို့6GB RAM ပြင်ဆင်မှုနှင့် 128 GB သိုလှောင်မှုဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံအမှတ်အသားသည်ထုတ်လုပ်သူအများစုအတွက်သာမကအသုံးပြုသူများအတွက်ပါ ဦး စားပေးကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တရများကိုဖမ်းယူခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်တော့ပေ။ လက်တွေ့ကျကျပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်များမှယေဘုယျအားဖြင့် iPhone ကင်မရာသည်နောက်ဆက်တွဲရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်း Samsung ၏ Terminal များ၊ အထူးသဖြင့် S range နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Note range တို့ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအရည်အသွေးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး ဟွာဝေကိုဘေးဖယ်ထားလို့မရဘူးSamsung သည် high-end terminals များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်ဓာတ်ပုံစနစ်တစ်ခုကိုပေးရန်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Huawei သည်၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာအရည်အသွေးကိုအလောင်းအစားပြုရုံသာမက P20 Pro နှင့်ရိုက်ယူနိုင်သောဓာတ်ပုံများ၏ resolution ကိုချဲ့ကားပြောဆိုခဲ့သည်။
Galaxy Note9က 12 MP ကင်မရာနောက်ဘက်ကင်မရာစနစ်ကိုပေးထားပါတယ်f/ 1,5 မှf/ 2,4 သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော aperture optical stabilizer နှင့်အတူ။ iPhone X သည်မှန်ဘီလူးတစ်ခုစီတွင်f/ 12 နှင့်f/ 1.8 ၏ပုံသေ aperture ပါ ၀ င်သည့် 2.4 mpx dual-camera နောက်ဘက်ကင်မရာစနစ်ကိုလည်းပေးထားသည်။ ၎င်းတွင် optical stabilization system နှင့် two-magnification optical zoom ကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။
Huawei P20 Pro ဖြစ်လာသည် ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးဆကင်မရာစနစ်ကမ်းလှမ်းရန်ပထမ ဦး ဆုံး terminal ကို။ တစ်ဖက်မှကြည့်လျှင် 20 mpx အနက်နှင့်အဖြူရောင်အာရုံခံကိရိယာ၊ နောက်ထပ် 40 mpx RGB သည် optical stabilizer နှင့် 8 mpx တစ်ခုထက်ပိုသောကျွန်ုပ်တို့အား 3x optical zoom နှင့် optical stabilizer ကိုဖော်ပြထားသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များနှင့်ကတည်းက Instagram သည်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအစားအစာဟင်းလျာများ၏ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်ရှေ့ကင်မရာသည် terminal တွင်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ have မှစတင်ခဲ့သည်။ ကြီးကျယ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူသုံးယောက်ကဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဒီအပိုင်းကိုလျစ်လျူရှုမထားဘူး။
Note9က autofocus ပါ ၀ င်တဲ့ 8 mpx ရှေ့ကင်မရာနဲ့f/ 1,7 ကို aperture ပေးထားပြီး၊ ပိုကောင်းသောရလဒ်များကိုနိမ့်အလင်းအခြေအနေများတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Apple သည်7/ mpx ကင်မရာကိုf/ 2.2 aperture ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး Huawei မှ selfie selfies ကို 24 / mpx resolution ဖြင့်ရုပ်ပုံများကို ap / aperturef/ 2.0 ဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကင်မရာ၏အဝင်အပေါက်သည်ထိုအရာဖြစ်သည် စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ် (သို့) အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်နံပါတ်နည်းလေလေမှန်ဘီလူးထဲ ၀ င်လာလေလေ၊ (လှုပ်ရှားမှုရှိပါက) ပုံများမှုန်ဝါးခြင်း၊ စပါးစေ့များသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်လွန်းခြင်းတို့မှကာကွယ်ရန်အချိန်နည်းသည်။
ဟုတ်တယ် Stylus မဟုတ်ဘူး
Samsung ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခိုင်းသည် Galaxy Note7ကိုဖယ်ရှားပါ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်လိုက်သောဘက်ထရီပြproblemsနာများကြောင့်ထူးဆန်းသောကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီက Note မှအသုံးပြုသူသည် Note မှဖြစ်ကြောင်းပြသည်။ Note ၏ S Pen နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုသင်မချန်မထားနိုင်ပါ.
ဤဆောင်းပါးအစတွင်ငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအချို့သောထုတ်လုပ်သူများက LG နှင့် Motorola ကဲ့သို့သော Samsung ၏ Note ကိုအခြားစျေးကွက်များသို့ရောင်းချရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်တွင်အနည်းငယ်သာအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးလက်တွေ့တွင် သတိမပြုမိသွားပြီ.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖန်သားပြင်အရွယ်အစားသိသိသာသာကြီးထွားလာခြင်းနှင့် terminal များကိုအချိန်နှင့်အမျှထုတ်ကုန်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် လက်နဲ့ကိုင်တွယ်ရတာပိုခက်တယ်။ S Pen ကပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်၎င်းတံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်၎င်း terminal ကိုစျေးနှုန်းအရအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Note9၏ S Pen ကဖန်သားပြင်ကိုမှတ်စုများကိုပိတ်ထားစဉ်၊ ဖန်သားပြင်တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်၍ မျှဝေရန်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်သာမကဘဲ Bluetooth နည်းပညာကြောင့်လည်း အတွင်းပိုင်းကိုတွေ့တယ် ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းကို remote control တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည် ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံဖွင့်ခြင်းနှင့်တေးဂီတကိုထိန်းချုပ်ရန်
Terminal ကိုဝယ်သည့်အခါအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကင်မရာကကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရည်အသွေးအပြင် terminal ကိုရရှိနိုင်သောအရောင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Samsung Galaxy Note9၏အရောင်များ
သမုဒ္ဒရာအပြာရောင်။ သိုလှောင်မှုပမာဏ 512 GB နှင့် RAM 8 GB ရှိသည့်ဗားရှင်းတွင်သာရနိုင်သည်။
iPhone X အရောင်များ
Huawei P20 Pro အရောင်များ
La အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ် မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို ၀ ယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ကခွင့်ပြုသရွေ့၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ Samsung, Apple နှင့် Huawei တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနည်းပါးသောသုံးစွဲသူများစွာသိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စမတ်ဖုန်းအများဆုံးရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီသုံးခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။
ဈေးကွက်ထဲမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်သည် ညီတူညီမျှတရားဝင်အခြားနည်းလမ်းအလားတူသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများမှာ။ Note 9၊ iPhone X နှင့် Huawei P20 Pro တို့ကိုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာများကို၎င်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် OnePlus 6, LG G7 Thing Q, Xiaomi Mi 8 နှင့်ပင် Google က Pixel2XL.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Samsung Galaxy Note9နှင့် iPhone X vs Huawei P20 Pro
Samsung Galaxy Note9နှင့် Galaxy Note 8 ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်သတ်မှတ်ချက်များ
သင့်မှာ Samsung Galaxy Device ရှိလား။ Fortnite APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ